माकुराको जालो र तस्करको जालो बुझ्न नसकिने भयो । एयरपोर्टदेखि पहिले कोदारी र अहिले केरुङ नाकाबाट ८८ किलोसम्मको सुन अवैध रुपमा भित्रिरहेको छ, एकाधपल्ट सुन समातिन्छ, तर सुन मालिक समातिन्न ।
प्रहरी भन्छ– सुराक पाइएको हो । पछि लागेर सुन समातियो । प्रहरी नै भन्छन्– दैनिक सय किलोभन्दा बढी सुन तस्करीमार्गबाट भित्रिरहेको छ । थाहा छ, सुराक पनि छ तर तस्कर समातिन्न भने दालमे कुछ काला है ।
कति पक्का रहेछ, सुन तस्कर र सुरक्षा, प्रशासनको सेटिङ ? जतिसुकै पल्ट सुन छाडिए पनि, एउटा प्रज्ञापनपत्रबाट जतिसुकै पल्ट सामान छाडे पनि भन्सारका कर्मचारी, राजस्वका कर्मचारीलाई कानुनले छुने रहेनछ । के भन्सारका कर्मचारीको मिलोमतो, सुरक्षाकर्मीको सेटिङ बिना तस्करी सम्भव छ ? छैन भने ती दोषी कर्मचारीलाई पञ्चखत माफिी दिने परम्पराचाहिं के हो नि ?
वन्यजन्तु, लागूऔषधलगायतका तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट भइसक्यो नेपाल, कुख्यात अपराधीको आश्रयस्थल पनि नेपाल नै हो । भर्खर भारतमा ढोंगी बलात्कारी बाबा रामरहिमकी रखेल पनि नेपाल नै आएर लुकेको भन्दै भारतले धुवाँधार प्रचार गरिरहेको छ । तैपनि नेपालको सुरक्षाकर्मी टसमस गर्दैनन् ।
जसलाई पनि स्वागत गर्ने, पैसा पाएपछि आशंका नगर्ने र उसैसँग मिलिभगत गर्ने प्रशासन र सुरक्षाका कर्मचारीको लाभ उठाएर आपराधिक कर्म गर्नेहरुले नेपाललाई अपराधको स्वग ठानेका हुन् । नेपाल आउने, तिनको बारेमा केही न केही जानकारी लिने हो भने कुन व्यक्ति अपराधिक कर्ममा लागेको हुनसक्छ भन्ने कुरा सुरक्षाकर्मीले सहज रुपमा किटान गर्नसक्छ । तर विकृति यसरी बढेको छ कि देश जे सुकै होस्, फाइदाचाहिं हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा देशको सुरक्षा र सुशासन नराम्ररी चर्किन पुगेको छ । विदेशीहरु यौनकर्म गर्न, अप्राकृतिक यौनक्रिडा खेलन, लागूऔषध, विदेशी मुद्रा, बहुमूल्य धातु, लोपोन्मुख जीव एवं बन्य जन्तुका अंगहरुको तस्करी जे गर्न पनि नेपाल नै आउने गरेका छन् । यहाँसम्म कि अन्य मुलुकमा अपराध गरेर लुक्ने गुँड पनि नेपाल नै बनेको छ ।
यतिबेला सुन व्यापारी नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको पाइएको छ । व्यापारीबाट डराउने, लाभ लिएर कन्सेसन दिने गरेर पनि तस्कर प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको हो । तस्करहरुको त अव गिरोह नै सञ्चालन हुनथालेका छन् ।
पछिल्लो घटना भदौ १९ गतेको हो । चीनबाट रसुवा हुंदै काठमाडौ भित्रिएको ८८ किलो सुन काठमाडौको क्षेत्रपाटीबाट पक्राउ गरेपछि सुन तस्करीको विषय निकै चर्चामा छ । यस अघि गत वर्ष पुसमा एयरपोर्टबाट साँढे ३३ किलो अबैध सुन पक्राउ भएको थियो । यी दुबै सुनकाण्डको छेउटुप्पो के हो, प्रहरीले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । यसबाहेक नेपाल एयरलाइन्सका सिनियर पाइलटले गरेको विदेशी मुद्राको ओसारपसारले अनेक प्रश्न उव्जाएका छन् ।
नेपालको सुरक्षा अधिकारीहरुका सामु यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । वन्यजन्तुको सिकारदेखि सुनलगायतका तस्करी धन्दामा किन भरियामात्र पक्राउ पर्छ । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था यसरी भ्वाङ परिसक्यो कि तस्कर, माफियालाई पनि पक्राउ गर्न असक्षम भइसक्यो । यदि त्यसै हो भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको संरचनामा विशेष परिवर्तन आवश्यक छ । र, प्रत्येक भन्सारका नाकाहरुमा भन्सार कर्मचारीहरुले तस्करलाई जसरी सघाउने गरेका छन्, तिनीहरुमाथि पनि कारवाही हुनुपर्छ । यस्तै हो भनेर छाडिदिने हो भने सुशासनको कुरा गफैमात्र हुनेछ ।